Vaovao - Ahoana ny fametrahana tontonana haingon-trano amin'ny rindrina pvc
Ny takelaka rindrina PVC dia safidy tsara amin'ny haingon-trano amin'ny rindrina. Ny vokan'ny haingo ankapobeny dia avo lenta ary takatry ny vidiny. Mila mianatra fahalalana matihanina vitsivitsy ianao rehefa mametraka, mba ho haingana kokoa ny fanamboarana haingo ary azo antoka ny vokan'ny haingo. Avelao aho hampahafantatra anao, ny fomba fametrahana birao fanaingoana rindrina pvc?
1. Ahoana ny fametrahana birao fanaingoana rindrina pvc
1. Rehefa manaingo dia azonao atao ny misafidy ilay karazana fampiatoana maina, ao anatin'izany ny fanamafisana ny tombo-kase eo amin'ny rindrina ambany aloha, ary ny fampifandraisana ny tabilao momba ny hafanana haingon-trano miaraka amin'ny keel amin'ny alàlan'ny vy miharo na vatofantsika manokana. Ny tonon-taolana eo anelanelan'ny tonon-taolana dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny rafitra fanamafisam-peo amin'ny rindrin'ny rindrina extruded board, benzene board na volon'ondry vato. mameno.
2. Ny karazana mety tanteraka dia mety kokoa amin'ny tetikasa insulation rindrina anatiny. Noho izany, mandritra ny fametrahana ny rafitra fanamafisam-peo any ivelany, ny tabilao insulated thermal insulation sy ny rindrina eo ambany dia mifandray amin'ny alàlan'ny fatorana na fatorana tanteraka, izay antsoina hoe karazana mifamatotra tanteraka. Ny fomba manual dia tsy maintsy faritana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny firafitra manokana. Mampiasà rihitra iraisana manokana na fitaovana hafa hamenoana ny toerana misy eo anelanelan'ireo tonon-taolana.
3. Ny fampifangaroana ny vatofantsika sy ny vatofantsika dia miankina indrindra amin'ny fepetra takiana amin'ny fananganana. Ny rafitra fantsom-panafenana hafanana ivelany an'ny tabilao haingon-trano miaro amin'ny hafanana dia atambatra amin'ny fitambarana sy ny tsorakazo vatofantsika hanamboarana ny tabilao haingon-trano amin'ny alàlan'ny rindrina. Ny fotony dia atambatra amin'ny pendant mifatotra sy maina tanteraka, ary be mpampiasa amin'ny injeniera.
2. Fampidirana ny tombony azo amin'ny rindrin'ny pvc
1. Ny tombony lehibe indrindra dia ny lanjany maivana. Niadana be ireo mpiasa nandritra ny fanamboarana. Izy io dia misy insulated hafanana tsara sy fiasa fiarovana ny hafanana. Ampiasao ny tabilao firavaka PVC. Amin'ny lafiny iray, dia tena sariaka amin'ny tontolo iainana koa izy io. Ririnina ny trano. Mafana sy mangatsiatsiaka ny fahavaratra, manafoana ny filan'ny rivotra ary mamonjy angovo be dia be, nefa koa misy tombony azo avy amin'ny hamandoana, tsy mahazaka afo, asidra sy fanoherana alkali, fanoherana ny harafesina, valindrihana an-dakozia na fandroana na rindrina haingon-trano.
2. Ny tontonana haingon-trano PVC haingon-trano dia misy fahamarinan-toerana avo sy fananana diélectrika tsara. Aorian'ny fampiasana maharitra, maharitra kokoa izy io noho ny fitaovana firavaka hafa amin'ny rindrina. Tsy matahotra ny taratra sy ny tara-masoandro izy. Izy io dia manana toetra tsara fanoherana ny fahanterana. Mora ny mikiraoka ao am-bava ary miraikitra mafy amin'ny rindrina.
3. Firafitra avo, tanjaka miondrika avo, fanoherana mahery vaika, fanitarana avo lenta amin'ny fitsangatsanganana, fitaovam-panangonana aorian'ny famitana haingon-trano, tsy mora hiteraka fako sy fitehirizana ny vidin'ny haingon-trano. Ny tabilao fanaingoana ny rindrina pvc dia manana faritra marevaka, loko marevaka, lamina maro samihafa, vokatra haingon-trano tena manankarena ary fampiharana haingon-trano maro karazana.
4. Ny fizotran'ny fananganana dia tena tsotra, mety tsara ny manomboka fametrahana ao an-trano, ary mety tsara ny fametrahana. Ny birao fanaingoana rindrina PVC dia mora diovina amin'ny fiainana isan'andro. Tsy matahotra izay lasopy na ankizy manao graffiti an-tsitrapo izy. Fafao moramora fotsiny amin'ny lamba mando hamerenana amin'ny laoniny ny fahadiovana.
5. Ny tabilao fanaingoana rindrina PVC dia fitaovana haingo plastika. Ny tabilao PVC dia vita amin'ny rafitra tantely tantely. Noho ny tsipiriany, ny loko ary ny lamina, dia haingon-trano be izy io, fantatra ihany koa amin'ny sarimihetsika haingon-trano, izay azo ampiasaina amin'ny haingon-trano amin'ny rindrina sy valindrihana anaty trano, ary ampiasaina amin'ny fomba samihafa amin'ny haingon-trano.